ဆည်တည်းရွာမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေ ခြံစည်းရိုးခတ်နေကြစဉ်
မစ္စတာ ဝမ်ရင်ဖီးကို မေးမြန်းချက်
မြန်မာဝမ်ပေါင် ကြေးနီထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လက်ပံတောင်းဒေသခံ တောင်သူအများစု စိတ်ကျေ နပ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပေမဲ့ နောက်ကွယ်ကနေ စည်းရုံးသွေးထိုးပေးနေသူတွေကြောင့် အခုလို ပဋိပက္ခတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နောက်ကွယ်က စည်းရုံးသွေးထိုးပေးနေသူတွေဟာ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေ အတွက် နေ့တွက်စရိတ် ငွေ ၈ ထောင် ထုတ်ပေး တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးမန်နေဂျာ မစ္စတာ ဝမ်ရင်ဖီးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
"အဓိကအကြောင်းရင်းကျတော့ သူတို့နောက်မှာ စည်းရုံးတဲ့လူရှိတယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အဖွဲ့ အစည်းတွေလာပြီးတော့ စည်းရုံးတယ်၊ သွေးထိုး တယ်၊ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့အမြဲတမ်း ဆန္ဒလာပြတာ၊ အများစုက ကျနော်တို့ စီမံကိန်းကိုလက်ခံတယ်၊ ကျနော် တို့လည်း ပေးထားတဲ့ ဒီပေါ်လစီတွေကို သူတို့က အကုန်လုံးသဘောကျတယ်လေ၊ မြေယာထောက်ပံ့ကြေးတို့ အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့ကြေးတို့၊ အဓိက အကြောင်းရင်းက သူတို့က ဒီဟာနောက်က ကြိုးဆွဲတဲ့လူရှိလို့၊ စည်းရုံးတဲ့လူရှိလို့ အဲ့လိုဖြစ်တာပါ၊ သူတို့က ဆန္ဒပြတဲ့အခါကျရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတယ်လေ၊ အစိုးရလည်း ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာပဲ၊ ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အခါ ကျလို့ရှိရင်လည်း သူတို့ိုပိုက်ဆံပေးတယ်လို့ပြောတယ်၊ ဝမ်ပေါင် ဝန်ထမ်း ခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် သူတို့ဝိုင်းပြီးတော့ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့သတင်းရတာ တစ်ယောက်ကို ရှစ်ထောင်ပေးမယ်တဲ့၊ အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တာရှိတယ်"
လက်ပံတောင်းဒေသ ဆည်တဲကျေးရွာသူ မဝင်းဝင်းဌေးကတော့ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတာဟာ လယ်ယာမြေတွေကို ကာကွယ်ဖို့သာဖြစ်ပြီး၊ နေ့တွက်စားရိတ်မရရှိဘူးကြောင်း ပြောပါတယ်။
မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကို စီမံကိန်းရုပ်သိမ်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ခွာသွားဖို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေရှိပေမဲ့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တရားဝင်လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စီမံကိန်းရုပ်သိမ်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လျော်ကြေးမယူတဲ့ လယ်ယာမြေတွေပေါ်မှာ ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာဟာလည်း ငှားရမ်းထားတဲ့ ဧက ၆၇၀၀ ပေါ်မှာ တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ဆောင်ရွက်တာသာဖြစ်ကြောင်း၊ ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ သီးနှံတွေအတွက်လည်း လျော်ကြေးပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။
မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ စီမံခန့်ခွဲရေးမန်နေဂျာ မစ္စတာ ဝမ်ရင်ဖီးကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပုသိမ်မြို့က အမားဗားစက်ရုံမှာ အလုပ်သမား ၁၅ဝဝ ကျော်ဆန္ဒပြ
ဖားကန့်မှာ ရွှေ့ပြောင်းခံဒေသခံတွေ ဆန္ဒပြ
Chinese and their step sons, Myanmar dictators are creating Myanmar to become like Ukraine by creating riots & Mobs in Myanmar so that they can seize the power illegally.
Myanmar dictators are very wicket, dirty, selfish and brainless.
Myanmar civilians are more qualify, sharp, patriotic and intelligent than Chinese their step sons, Myanmar peoples don,t want China to take any natural resource of Myanmar. Myanmar peoples don't care Chinese and their step sons, Myanmar dictators
Dec 31, 2014 10:39 AM
အဓိက အခြေခံ အကြောင်းရင်းကတော့ အာဏာရှင်တွေ အာဏာရှင်ပြီပြီ ပထွေးတရုပ်ကို ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း ကို လက်ညှိုးထိုး ရောင်းစားကြလို့ပဲ။
Dec 30, 2014 07:34 PM
နိုင်ငံရေးသမားတွေ မသိနားမလည်တဲ့ပြည်သူတွေ တောင်သူလယ်သမား တွေ ကို နိုင်ငံရေးေ သွေးထိုးစည်းရုံးမှုတွေကြောင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတာလို့
လိမ်ညာပြောဆိုနေပြီး ဝါဒ ဖြန့်နေ သူများ ဟာ ဖွတ် ခေါင်းဆောင် တွေ စစ်ခေါင်းဆောင် တွေ စစ်ခွေးတွေ မျက်ကန်းမျိုးချစ် တွေ သ္ခင်အားရ ကျွန်ပါး၀ တဲ့ လူမျ ီူးတွေ ဖြစ်နေတာ ပါ။
Dec 30, 2014 03:19 AM
CIA is creating Myanmar to become like Ukraine by creating riots & Mobs in Myanmar.
American is very wicket and dirty.
Myanmar Army is more qualify and sharp than Ukraine Army and Myanmar is very rich in natural resources. Myanmar don't care American.
Dec 29, 2014 10:30 PM
“ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တရားဝင် လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ..”
ဥပမာတခု ပေးချင်ပါတယ်။ Hotelမှာတည်းတဲ့ ဧည့်သည်ဟာ Hotelရဲ့ ပိုင်နက်မှာ အလေးအပေါ့စွန့်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး အိမ်သာအိုးမှာ မစွန့်ပဲ ကုတင်ပေါ်က ခေါင်းအုံးပေါ်ထိုင်စွန့်ရင် အဲဒီဧည့်သည်ကို ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။
Dec 29, 2014 08:57 PM